Avy tamin’ilay Fihaonambe: Vondrompiarahamonina tsy mbola fandre ary Fiatrehana ireo fanamby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2019 16:50 GMT
Inona ireo feo tsy ao anatin'ny resaka an-tambajotra?
Nandritra ilay fihaonana anatiny natao nandritra ny Fihaonamben'ny GV tany Cebu, nametraka fanontaniana lehibe ho an'ireo mpanatrika aho nandritra ny anjara famelabelarana Rising Voices nataoko. Nangatahako izy ireo hieritreritra mikasika ireo vondrompiarahamonina tsy dia voasongadina loatra anatin'ny Aterineto. Nanontaniantsika io satria izany no tadiavin'ny RV ho vahana. Manome tohana amin'ny endriny famatsiana ara-bola bitika, fanoroana hevitra sy fizarana fitaovana ho an'ireo vondrompiarahamonina ireo izahay mba hahafahany mitantara ny tantarany nomerika. Ao amin'ny tranonkala Global Voices, asongadinay ihany koa ireo olona, tetikasa ary fitaovana mahaliana izay mizara ny asa fampandrosoana sy fanohanana ireo feo vaovao ireo miaraka amin'ny fanantenana hoe mba hanainga ny hafa haka fepetra hampitombo ny fahamaroana ety anatin'ny tranonkala izany.
Kanefa, mila ny fanampianareo izahay mba hanohizana ny famantarana ireny vondrompiarahamonina ireny sy mba hieritreritra mikasika ny zavatra azontsika atao mba hamahana ity olana momba ny fahabangan'ny fandraisana anjara ity. Araka izany, nangatahako ireo mpandray anjara mba hieritreritra mikasika ny sasany amin'ireo vondrompiarahamonina ireo any amin'ny fireneny na ny faritra misy azy ireo mba hahafahanay manomboka ny fametrahana an-tsaritany azy ireny. Irinay ny hanohy ny hiara-hiasa akaiky amin'ireo ekipa isamparitra mahafantatra bebe kokoa ny faritra misy azy noho izao tontolo izao mba hanaparitaka ny hafatra sy ny fitaovanay manerana ireny vondrompiarahamonina eny an-toerana ireny. Mety hisy fomba hafa ihany koa hahafahana mirotsaka bebe kokoa amin'izany, toy ny fampiantranoana Fihaonana GV. Afaka mahita sasany amin'ireo eritreritry ry zareo natao an-tsarintany etsy ambany ianao. Tsindrio eo amin'ilay paingotra mba hahitàna ilay vondrompiarahamonina voafaritra.
Manasa ireo GVers rehetra izahay, indrindra ireo tsy tao Cebu, mba hanolotra ny sosokeviny amin'ny alalan'ity taratasy hofenoina ity ary hotohizanay ny fanavaozana ilay sarintany.
Fa ndeha isika tsy hijanona amin'ny fametrahana an-tsarintany fotsiny ireny vondrompiarahamonina ireny. Amin'ny alalan'ity lisitra ity, tianay ny hanampy ireo ekipa isam-paritra amin'ny fiatrehana ireo fanamby sasany, atomboka amin'ny fanaovana fikarohana mba hahafantarana ireo hetsika santatra nalaina manerana izao tontolo izao hamaliana io filàna io. Mety ho lohahevitra tonga lafatra ho an'ireo lahatsoratra am-bilaogin'ny Rising Voices izany, izay hahafahana manasongadina ny sasany amin'ireny vondrompiarahamonina ireny. Raha tsy izany, misy zavatra hafa azontsika atao koa, toy ny fanentanana ireo fikambanana miasa miaraka amin'ireny vondrompiarahamonina ireny mba hampahafantarana azy ireo ny fomba hanampiana azy hampiasa ny Aterineto mba hizarana ny tantarany.
Ndao hiara-hiasa ny RV sy ireo tarika isamparitra mba hanombohana ny fieritreretana mikasika ireny fanamby ireny.